KTVမှာနကွောပနျးလေးတှနေဲ့ပြျောပါးပွီးပွနျလာတဲ့ဗိုလျကွီးနှဈဦးဖောငျးဒိုငျးခံရ - Tech View 24
Previous: ၂၆ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ည ၇ နာရီခွဲ အမေရိကန်သံရုံးမှ အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ထင်မထားတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟေ့
Next: 27 . 10 . 2021 မနက် ၁၁ နာရီ KNU ရဲ့ အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ပြည်သူတွေထင်မထားတဲ့အခြေနေရောက်ပြီ